I-BTB080060-M1D19200 0.80mm yokuhlangana kabini kwiBhodi-ukuya-kwiBhodi 2 * 30P Isidibanisi samadoda Ukuphakama = 7.0-8.5mm
Umjikelo wokuDibana: Imijikelo engama-50
Inombolo Icandelo: BTB080060-M1D19200
Ukuphakama kobude: 7.0-8.5mm
Ubushushu bokusebenza: -25 ~ 85 degree
Ukumelana Iinkcukacha: 60 mΩ Max
Sibonelela ngeSlimStack Board-to-Board / 0.35mm i-pitch Board-to-FPC izihlanganisi / kubathengi kwihlabathi liphela.
I-Voltage yokuSebenza 60V AC / DC
Inqanaba langoku 0.5A / iPin
Ukumelana zokuvala Imizuzu engama-800 ye-Ohms min kwi-250VDC
Nxibelelana noMkhosi wokuGcina 100gf Min Ngonxibelelwano ngalunye
Ukumelana noQhakamshelwano I-60 MAX
Imijikelo yokuDibana Imijikelo engama-50
Iimakethe ezijoliswe kuyo kunye nezicelo
Izixhobo zeTelecom / zeDatacom
Ikhadi lovavanyo kunye neZandiso zeKhadi
Izixhobo zovavanyo kunye neMilinganiselo
Iimpawu zeMveliso Ixesha elide lobomi (ngaphezulu kwamaxesha angama-30); Iimodeli eziqhelekileyo ezisetyenziswayo;
Ubungakanani bokupakisha obuqhelekileyo 5000pcs
Iinkcukacha zokupakisha: Iimveliso zipakishwe nge-reel & ukupakisha ngetape, ukupakisha okungaphezulu, ukupakisha kwangaphandle kusezibhokisini.
Iinkcukacha zokuhambisa: Sikhetha i-DHL / i-UPS / i-FEDEX / i-TNT iinkampani zokuhambisa zangaphandle ukuthumela iimpahla.
Inkampani ine-R & D enobuchule kunye neqela lolawulo, kunye nenqanaba lokuqala lodidi lwezixhobo zemveliso eziphambili kunye nezixhobo zovavanyo ezichanekileyo. Imakethi yasekhaya iphambili kumazantsi eTshayina, imitha yelizwe lonke, imakethi yelizwe jikelele iphambili eHong Kong, eTaiwan kunye nabaxumi behlabathi.
Iimveliso zisetyenziswa ikakhulu:izixhobo, unxibelelwano, ukhuseleko, izixhobo zonyango, ii-motherboards zekhompyuter, inkqubo elawulwa yinkqubo, ikhamera yedijithali, i-LED ombanenjl.
Ubuso bokwenza ulwenziwo olomeleleyo, iziko lethu le-R & D elomeleleyo, umenzi wokungunda kunye neziko lokuqhubekeka, elinokuqonda ngokukhawuleza iimfuno zabathengi, ukubonelela ngeemveliso ze-OEM / i-ODM ngeyona mveliso inokuthenjwa kunye nezihlanganisi ezichanekileyo zabathengi abahlukeneyo.
Amagama aphambili: Sibonelela nge-0.8mm i-board-to-Board eyindoda isinxibelelanisi / i-0.8mm i-pitch 60Pin Iibhodi eziya kwibhodi yezihlanganisi / iBhodi kwiBhodi ePitch 0.8mm Uhlobo lwesiDibanisi soLuntu / iSetyhula yebhodi yePcb yeBhodi kwiBhodi yabasetyhini i-0.8mm Pitch / umphezulu Uhlobo lwebhodi yeNtaba yeSmt ukuya kwiBhodi yesiPlawu seNdoda, Sithumele kubathengi kwihlabathi liphela.
1. Zonke iimveliso zivavanywa ngombane nge-100% ngaphambi kokuthunyelwa, ziqinisekisa ukusebenza ngokugqibeleleyo.
2. Iisampulu zihlala zifumaneka (imizobo yakho okanye iimfuno zokubalula zihlala zamkelekile.)
3. Nawuphi na umbuzo okanye umbuzo uza kuphendulwa kwisithuba seeyure ezingama-24.
4. Inkonzo elungileyo emva kokuthengisa
5. Wamkelekile ukutyelela umzi-mveliso wethu nanini na.
6. Ixesha elifutshane lokukhokela
Ukuhambisa ngenqanawe: Siyakuxhasa ukuhanjiswa okukhawulezileyo, ukuthuthwa komoya, ukuthuthwa kukaloliwe kunye nokuthuthwa kolwandle.
Egqithileyo I-FPC03045-42201 FP C0.3mm XP SMT H = 1.0mm Uhlobo oluVulekileyo isinxibelelanisi esimnyama esisetyenziselwa ulwazi ngemveliso yefowuni ephathekayo.
Okulandelayo: Enye intambo encinci ye-3.0mm yocingo lokucoca ulwelo ukuya kwibhodi yezindlu kunye nentloko
I-0.35mm Pitch Board-To-Board Connector
I-0.5mm Pitch I-Smt yeBhodi-ukuya-kwiBhodi yeQhagamshela
Ezantsi Isinxibelelanisi seBhodi-to-Board Isinxibelelanisi